Hordhaca: Horseed Vs Dekedda- Xogta Kulankan iyo Falanqeynta Wax walba aad ugu baahan tahay %
Hordhaca: Horseed Vs Dekedda- Xogta Kulankan iyo Falanqeynta Wax walba aad ugu baahan tahay
By Ramzi Yare	 On Mar 14, 2019
Kooxda Kubadda Cagta Horseed ayaa galabta kulan xiiso badan la dheeli doonta Naadiga difaacaneysa Horyaalka Soomaali Premier League ee Dekedda Fc , kulan ciyaareed qeyb ka ah Horyaalka Somali Premier League.
Kulankan ayaa ah mid aad u adag oo ka dhaxeeya kooxaha Horseed iyo Dekedda kuwaaso uu ku hardamaya hogaanka horyaalka, kaliya waxaa u dhaxeysa 2-dhibcood oo qura, Dekedda waxey leedhahay 13-dhibcood halka Horseed ay leedhahay 11-dhibcood.
Labadan kooxod ayaa galabta waxey dheelayan kulamadoodii 6-aad ee horyaalka fasal ciyaareedkan.
Wiilasha Difaacanaya Horyaalka ee Dekedda kulankan waxaa dhaawac ugu maqnaan doona ciyaaryahanka lagu magacaabo Ereg Mata kaas oo dhaawac soo gaaray tababarkii ugu dambeyay ay kooxdan iskugu diyaarineysay kulankan, balse nasiib daro xidigan ayaa dhaawac ku seegaya ciyaartan.
Sido kale Dekedda waxey dib u heleysa xidiga la yiraahdo Zakariye Towfiiq oo kulamadii ugu dambeyay kooxda Dekedda ugu maqnaa saddex kaar oo jaala ah balse kulan galabta diyaar ayuu u yahay inuu u safto kooxdiisa.
Waxaa Sido kale Dekedda dib ugu soo laabanaya ciyaaryahankeeda reer Kenya Reymond Mongi oo dhaawac ugu maqna kooxdiisa kulamadii ugu dambeyay ay dheesho.
Naadiga Horseed kulan ciyaareedkan waxaa xanuun kasoo bax ah ugu maqnaanaya ciyaaryahanka lagu magacaabo Farxaan Duqow kaaso oo kamid ah xidigaha ugu wanaagsan kooxda cawo iyo maalin ee Horseed.
Kooxaha: Horseed Fc Vs Dekedda Fc
Kulanka: 26-aad ee laga dheelayo Horyaalka
Saddexdii dheel ee ugu dambeysay ay labadan kooxod isku arkan horyaalka waxaa mid kamid ah badisay naadiga Horseed halka labada kulan kale ay bar baro galeyn labada kooxod, waana ciyaar aad u adag marka loo eego kulamadii ugu dambeyay ay is wajahan Horyaalka.
Kooxda Dekedda kulankii ugu dambeyay waxey 1-0 ugu soo adkaatay naadiga jaalayasha ee Elman kulan ciyaareed dhacay 7-dii bishan aan ku guda jirno.
Naadiga Cawo Iyo Maalin ee Horseed ciyaartii ugu dambeysay waxey 2-0 ku soo garaacday kooxda Midnimo, ciyaar dhacday 8-dii bsihan.
Dekedda waxaa galabta ka hor imaan doona ciyaaryahankeeda hore Cabdulaahi Cali Bale kaaso oo waqti fiican la soo qaatay kooxda Dekedda balse galabta ma ahan ciyaaryahan qeyb ka ah Dekedda wuxuu ka tirsan yahay Naadiga Horseed, waana kulankiise ugu horeyay oo ka hor imaanayo kooxdiise hore ee Dekedda.
26/02/2018 Horseed S.C 0 : 0 Dekedda SC
21/04/2018 Dekedda SC 2 : 2 Horseed S.C
21/02/2017 Dekedda SC 1 : 2 Horseed S.C
Kooxaha: Mogadishu City Club iyo Gaadiidka kulan adag ku dhexmari doona galabta garoonka koonis stadium
Liverpool Oo Is Ka Xaadiriyay Wareegga 8-da ee Champion laeague-ka